Xiaomi Mi Rịba ama 2 bụ onye ọrụ ugbu a mgbe ogologo echere | Akụkọ akụrụngwa
Ọbịbịa ahụ adịla anya mana nkeji ole na ole gara aga Xiaomi emeela ka ọha na eze mara ihe bụ ọkwa ọhụrụ ya, nke ga-abụkwa otu nnukwu kpakpando nke ahịa ekwentị mkpanaaka na ọnwa ndị na-abịa. Anyị na-ekwu n'ezie Xiaomi Mi Rịba 2, a phablet na a 5.7-anụ ọhịa ihuenyo na anya dị ka okpu Galaxy Cheta 7 na ndị na-arọ nrọ inweta niche ya n'ahịa ma karịa ihe niile banyere iru ọnụ ọgụgụ ahịa ya.
Anyị amatalarịrị ihe niile gbasara ọdụ ọhụrụ a, mgbe ọnụọgụ a na-apụghị ịgụta ọnụ, maka ngosipụta nke mere taa na Beijing enyerela aka ịkwado ihe niile anyị marala.
Otu n'ime akụkụ mbụ anyị nwere ike ikwenye na nke a Xiaomi Mi Rịba 2 bụ nke ya 5.7-anụ ọhịa OLED panel, kpọmkwem otu nha nke anyị nwere ike ịchọta na njedebe nke ezinụlọ Galaxy Note, yana ụfọdụ akụkụ dị n'akụkụ nke na-enye ya ihe na-adọrọ mmasị karịa. Dị ka data na-adọrọ mmasị, Xiaomi ekwenyela na ihuenyo ahụ dị 77.2% nke n'ihu ọnụ.
Banyere imewe nke ọnụ, ndị China emeputa jisiri ike a ọnụ na anyị na-esi ọnwụ bụ otu ugboro ọzọ dị nnọọ ka ndị ọzọ ọnụ na ahịa, ma nke ahụ na-aka ya aka na a dara imewe na nnọọ pụtara ìhè na agba na-ele (piano) ojii na glacier ọlaọcha), na-enweghị ịgabiga ịdị mkpa na ezi uche.
1 Atụmatụ na nkọwa
Ọzọ anyị ga-enyocha ihe isi atụmatụ na nkọwa nke Xiaomi Mi Rịba 2;
5,7-inch OLED ihuenyo na FullHD mkpebi
Ihe nghazi Snapdragon 821
4 ma ọ bụ 6 GB nke DDR 4 RAM
Nchekwa dị n'ime nke 64 ma ọ bụ 128 GB nke ebe nchekwa dị n'ime UFS 2.0
Igwefoto na-aga n'ihu na Sony IMX318 23 megapixel sensor na nyocha onyonyo anya na f / 2.0
Igwefoto ihu nwere ihe mmetụta 8 megapixel
Njikọta; NFC, 24 dara ụda HiFi
Batrị 4.070 mAh Ndenye Nchaji batrị 3.0
A na-enweta ya na agba 2: ọlaọcha piano na ọla ọcha
Ọ bụrụ na anyị nyochaa ntakịrị ihe anyị na-ahụ n'ime nke ọhụrụ a Xiaomi Mi Rịba 2 anyị nwere ike ịghọta na anyị na-achọta ihe kachasị dị egwu nke oge ahụ. Ma ọ bụ na onye nrụpụta China ahọrọla ihe nhazi Qualcomm Snapdragon 821, nke ha jiriworị maka Mi5S, nke ihe ọ bụla ga-akwado ma ọ bụ ihe na-erughị 6GB RAM, nke anyị na-atụ anya iji na-adị mfe na enweghị imegharị nsogbu ndị anyị hụburu na ọdụ ndị ọzọ.
N'ihe banyere nchekwa dị n'ime, anyị ga-ahụ nsụgharị dị iche iche nke nchekwa, nke kachasị n'ime ha bụ 128GB. Batrị ahụ dị 4.100 mAh ma nwee ohere ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa maka teknụzụ Ndenye Ọgwụ, ọ bụ ezie na batrị a kwesịrị ịbụ ihe zuru oke iji nwalee ọnụ ala mgbe ị na-eche ndụ batrị nke ihe karịrị otu ụbọchị zuru ezu.
Dika Xiaomi kwuputara, ihe ohuru a nke Mi Note 2 ga adi na ubochi na abia n’azu ahia ndi China n’ime odighi ya nile. Iji nwee ike inweta ya na Europe ma ọ bụ site na Europe, anyị ka ga-echere ụbọchị ole na ole ma dịka anyị si eme, anyị ga-enweta ya site na ndị ọzọ ma ọ bụ site na otu n'ime ọtụtụ ụlọ ahịa dị na mbufe mba ofesi.
Maka ọnụahịa, ụdị dị nwayọ karịa 4GB nke RAM na 64GB nchekwa dị n'ime ga-akwụ ụgwọ na yuan 2.799, nke bụ ihe dị ka euro 379 na ọnụego mgbanwe. Modeldị kachasị elu nke nwere 6GB RAM na 128GB nchekwa, nke bụ n'ezie ihe anyị niile ga-achọ, ga-efu 3.499 yuan, nke ga-abụ ihe dịka 475 euro na mgbanwe ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ na-akpali akpali price maka ọnụ nke ndị a e ji mara.
N'oge a ọ dị mkpa ikwu na Xiaomi na-akwado ndị agha LTE mba ụwa na nsụgharị Global nke ọnụ ọnụahịa ya ga-abụ ihe dịka euro 500. Tupu ịmalite n'ime ịzụta ụdị ọ bụla, debe ozi a ugbu a.
Kedu ihe ị chere gbasara Xiaomi Mi Note 2 nke enyerela taa?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Xiaomi Mi Rịba ama 2 bụ onye ọrụ ugbu a mgbe ogologo echere
Ogologo oge. Ma onye mbu bu xiaomi
Apple tọhapụrụ mbụ mbụ melite na iOS 10